Oromiyaa: Oduu miliqxee batee! Essaa iyyuu hin geessuu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Oduu miliqxee batee! Essaa iyyuu hin geessuu.
OPDOn humna waraanaa baha Oromiyaa fii Ogadenia jiru hidhannoo guutuu waliin; Tankii, Mortar fii kkf fiddee magaalaa Bishooftuu keessa qubachiiftee jirti. Humna Kana gara lixa Oromiyaa akka geessuuf karoora qabdu oduun kun ifa godhee jira. Hilkobtarii fii Roophilaa lolaa dabaluun WBO balleesuuf karoorrii kawamee isa xumuraatii jechuun OPDOn Habash waliin waadaa walii galtee jirti.
Habashaan empire Xoophiyaa bulchaa jirtu Abiyiillee sodachisuun buufata lolaattii baqachisuunis beekamee jira
Bakka bulan illee hin qabani!
Baay’ee nama gaddisiisa; dhiyoo kana Hooggantootaafi Qondaalonni ABO Kiiloo Jaha bakka Dhabmsiisa Meeshaa Federaalaa, Waajjira OPDO durii lafa jalatti hidhamanii dararamaa turan manneen hidhaa garagaraatti qoqqodamuu isaanii gabaafnee ture.
Waan nama ajaa’ibaa manneen hidhaa Godina Addaa garaagaraatti warra qoodaman keessaa Dargaggoonni Qaroo fi hubatoo akkasumas muuxannoo QBO kuufatanii amala gaggeessummaan abuuraman Jaal Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana hidhaa Waajjira Poolisii Magaalaa Sabbataa keessatti ukkamfamanii argamu. Jaalli kiyya tokko akka gama sanatti imalee naa ibsetti, manni hidhaa guutuu irraan kan ka’e bakka bullu dhabnee guyyaas ta’e halkan Dirree dhiphoo kana keessatti dabarsina jechuun nama isaan gaafatetti himani; nama dhukkubsa. Jaallan kun lamaan urjii dha. Urjii qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO jalatti hammeenya gabroomsaa fedhe fudhatanii Bilisummaa keenyaaf falman.
Akkas jedhani “Yeroo K6 jirrullee guyyaatti Qarshii 20(Qarshii Digdamatu nuu qicama ture; amma garuu homtuu hin jiru” jechuun bifa qoosaan dhaammatani. Karaa biraa seerri biyya kana keessa jira jennee hin amannu; ummati keenya qabsoo godhuun gaafa of Bilisoomsu nutis baana jedhani.
Jaallan kun bakki amma itti argaman Buufata Poolisii Ona Sabbataa Hawaas ganda 01 ta’us bifa imaanaa(Adaraan achi teessifaman malee galmee akka achii hin qabne himatu)
Cubbuu akka kanaa kan qabu sirna gabroomsaa fi Abbaa Irrummaa tahuu hubannee Jaallan kanaafi kan biroollee itti deddeebiin nuffii tokko malee gaggaafachuun akka cinaa dhabbannu isiniif dhaamna.
#BREAKING_NEWS Tigraay keessatti waraana geggeeffamaa jiruun
gama mootummaarratti miidhaa guddaan gaheera. Waraanaa kaleessa galgala magaala
Mehoonii fi Maqalee gedduutti taasifameen taankiwwaan 4, Baasii 3 loltoota Mootummaa 120
fe’ee deemu waliin guutumatti gubachuun beekameera. Gama biraatiin odeeffannoo qabatamaa
maddeen waraanaa irraa argateen Sibaat Naggaa
fi namoonni biroon booji’aman jedhaman. Magaaluma Maqalee mana isaanii otoo jiruu
torbee lama dura waraaanni mootummaa marsee.qabe jedhameera. Qorannoon bal’aanis torbee
lama guutuu irratti taasifamuun beekameera.Yeroo ammaa mootummaan oduu kana akka
haaraatti gadi baasuun kaayyoo biraa qabajedhu. Kunis weerara Sudaan raawwataa jirtu
dhoksuuf, gabaasa UN ummannii Tigraayi
miliyoona 4.5 gargaarsa hatattamaa barabaada. jedhee kaleessa baasee hirraanfachiisuu fi
haleellaa kaleessa hidhattoonni Gumuz kaampii. waraanaa Matakkal jiru irratti raawwatanii
barbadeessan dhoksuufi jedhu taajjabdoonni. Maaliis yaa tahuu garuu yakkamtoonni kaleessaa
bifa kanaan salphachuun isaanii, yakkamtoonni. har’a ummata keenya ajjeessaa jiran bor yakka
jala akka hin baanes wabii tokkoo dha. Amalli badaan abbootii irree tokko walirraa barachuu